Kinova beta faharoa an'ny macOS Big Sur 11.4 ho an'ny mpamorona | Avy amin'ny mac aho
Fampivoarana beta faharoa an'ny macOS Big Sur 11.4 ho an'ny mpamorona
Tsy misy fitsaharana. Ilay kinova vaovao macOS Big Sur 2 beta 11.4 dia eo am-pelatanan'ny mpamorona ankehitriny ary toa tsy misy fanovana be loatra raha oharina amin'ilay kinova teo aloha navoaka andro vitsy lasa izay, afa-tsy ny fanamboarana bibikely mahazatra, ny famahana olana ary ny toy izany.
Apple dia manohy manao ny asany amin'io lafiny io ary tsy mijanona ny fahatongavan'ireo kinova beta na dia teo aza ny zava-misy fa tamin'ity indray mitoraka ity dia somary nanakorontana izahay tamin'ny kinova ofisialy navoaka, ny kinova beta, sns. ny kinova ofisialin'ny macOS Big Sur 11.3.1 navoakan'i Apple andro vitsivitsy lasa izay manamboatra olana lehibe amin'ny fiarovana, amin'ity tranga ity dia kinova beta ho an'ny mpamorona izany.
Amin'ity tranga ity, toy ny tamin'ny kinova beta teo aloha navoakan'i Apple, dia tsy misy angona amin'ny famaritana ny kinova beta navoaka ho an'ny mpamorona, noho izany tsy fantatray ny habetsaky ny fiasa vaovao nampiana. Amin'ity tranga ity toy ny tamin'ny tranga teo aloha mamporisika anao izahay hanalavitra ireo kinova beta ireo Ho an'ny mpamorona amin'ny solosaina ampiasainay isan'andro fotsiny, satria azon'izy ireo atao ny manimba ny fiasan'ny fitaovana sasany, ny fampiharana na ny toa azy.
Mety ny fiovana lehibe amin'ny kinova macOS Bic Sur dia ho tonga amin'ny WWDC manaraka Jona, noho izany andao hanam-paharetana ary hijery ny fomba nahagaga antsika ny orinasa Cupertino. Manantena aho fa ireo kinova beta ireo dia manamboatra ny bibikely ary tsy mila mamoaka kinova hafa avy hatrany aorian'ny famoahana ny kinova farany toy ny nitranga tamin'ny macOS Big Sur 11.3 ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » macOS Big Sur » Fampivoarana beta faharoa an'ny macOS Big Sur 11.4 ho an'ny mpamorona
Ny andiany "Miaraka amin'ny devoly" dia manitatra ny mpilalao azy